सरकारी विद्यालयको होस खुलाउने छक्का पन्जा ३ (फिल्म समीक्षा) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentसरकारी विद्यालयको होस खुलाउने छक्का पन्जा ३ (फिल्म समीक्षा)
October 10, 2018 Tulasa Karki Entertainment, Kollywood, News, Reviews 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – सिनेमाले मनोरञ्जन मात्र दिदैन । समाजमा घट्ने सामाजिक घटनालाई पनि उठान गर्छ । यसैले सिनेमालाई पनि समाजको ऐना भनिएको हुनसक्छ ।
६ एकान ६ देखि छक्का पन्जा २ सम्म सामाजिक बिषयवस्तुलाई कमेडीको माध्यमबाट उठान गर्दै आएका दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले यसपटक छक्का पन्जा ३ मा कथावस्तु भन्ने तरिका बदलिएका छन् । आखिर, आजबाट रिलिज भएको छक्का पन्जा ३ फिल्म कस्तो होला ?
सिनेमाको कथा सामान्य छ । सरकारी विद्यालयमा हुने गरेको राजनीति, राजनीतिक नियुक्ती, विद्यालयको कमजोर पढाई, मनपरितन्त्र र त्यसले निम्तो दिएको परिणाममा सिनेमा बनेको छ । तर, त्यो व्यथिती विरुद्ध आवाज उठाउने एक यूवतीको कथाले सिनेमामा नयाँ मोड लिन्छ । शहरमा पढेर आएकी दिपिका प्रसाईले दिपकराज गिरी, अनुराग कुँवर, निर शाहले खडा गरेको राजनीतिक संयन्त्रलाई कसरी भत्काउँछिन् भन्ने कथामा नै यो सिनेमा घुमेको छ ।
हेर्ने किन होला ?
दिपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाले यसपटक हसाँएका मात्र छैनन् । यसपटक, एउटा गम्भिर बिषयलाई उठान पनि गरेका छन् । सरकारी विद्यालयमा हुने राजनीतिले त्यहाँ काम गर्ने शिक्षक, पालेदाई, विद्यार्थी र अभिभावको साथमा सिंगो गाउँ र देशलाई कसरी गाँजेको छ भन्ने बिषय उठान गरिएको छ । यसपटक सिनेमाको सबैभन्दा हेर्नलायक बिषय यसको बिषयवस्तु हो । बिषयवस्तु चयनमा यसपटक उनीहरु जोखिम जोनमा छन् भने पनि हुन्छ ।
सिनेमाको कथावस्तु सरर बग्छ । सवा २ घन्टाको सिनेमा हेर्दा दर्शकलाई हाई काड्न पर्दैन । केदार घिमिरे, दिपकराज गिरी, जितु नेपाल, वुद्दि तामाङ , लक्ष्मी गिरी जस्ता कलाकारले सिनेमालाई सुस्ताउन दिएका छैनन् । सिनेमाको पहिलो नम्बरमा गीत हिट भैसकेको छ । यो गीतले पनि दर्शकलाई उत्साह थपिदिन्छ । कलाकार सबैको अभिनय बेजोड छ । सानो भूमिकादेखि पुरा सिनेमा धानेका कलाकारले दर्शकलाई होल्ड गर्छन् । सिनेमाको कमेडी लाइनहरु राम्रा छन् । केदार घिमिरे बोल्ने वित्तिकै दर्शक हाँस्छन् । अघिल्ला २ सिरिजमा दर्शकले कमेडी धेरै कथा कम हेरेका थिए, यसपटक दुबै हेर्न पाउनेछन् ।
महिला केन्द्रित कथा
यसपटक छक्का पन्जा ३ ले महिलालाई केन्द्रविन्दुमा राखेको छ । समाज बदल्नका लागि एउटा महिलाले के सम्म गर्छे र उ घरदेखि बाहिर कति शक्तिशाली छ भन्ने फिल्मले देखाएको छ । दिपिका प्रसाई र लक्ष्मी गिरीको भूमिकाले त्यो कुराको आभाष गराउँछ । यसैले अघिल्ला २ फिल्ममा महिलालाई कमजोर ठानेको आरोप खेपेका दिपक र दीपाले यसपटक त्यसलाई बदलेका छन् ।
कमजोरी के होला ?
सिनेमा भित्र त्यस्ता धेरै कमजोरी छैनन् । आफ्नै श्रीमती भेट्न टेलिभिजनको गेटबाट छिरेर सुरक्षागार्डसँग फाइट गरेको राजाको क्रियाकलाप दर्शकका लागि त्यती पाच्य नहुन सक्छ । फेरि उमेर ढल्केला गीत सिनेमा सकिएपछि आउँदा दर्शकलाई खल्लो लाग्न सक्छ । सिनेमाको क्लाइमेक्समा मुख्य खलपात्रलाई नै सामान्य तरिकाले चुकुल लगाएर थुनिदिदा दर्शकलाई खल्लो लाग्न सक्छ । उनीसँगको द्धन्द्धलाई अझै बलियो तबरले देखाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने देखिन्छ ।
यसपटक छक्का पन्जा ३ ले सरकारी विद्यालयलाई झकझक्याउने काम गरेको छ । सिनेमा सामान्य कथावस्तु र प्रेमको वरिपरी मात्र घुम्दैन । समाजका विकृतीविरुद्ध पनि बोल्नपर्छ । यसपटक दिपक र दीपा यो कुरामा सफल भएका छन् ।
आजबाट देशव्यापी प्रर्दशनमा फिल्म ‘छक्का पन्जा ३’
मेलिना राई र गोविन्द चेमजुङको स्वरमा ‘आना र सुक्का’ सार्वजनिक
April 6, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News, Videos 0